के हो हिस्टेरिया ? किन हुन्छ बढी महिलामा ? - Sacho Post
के हो हिस्टेरिया ? किन हुन्छ बढी महिलामा ?
२०७७ भाद्र २५, बिहीबार ०७:४९ बजे
– एक्कासी बेहोस हुने । (मासहिस्टेरिया भयो भने एकपछि अर्को गर्दै धेरै जना बेहोस हुने )
– टाउको दुख्ने । काम्ने ।
– शरीरको कुनै एक भाग नचाल्ने ।
– कोही कोही बिरामीमा बोली नआउने ।
– लामो लामो श्वास फेर्ने । डर लाग्ने ।
हिस्टेरियाबाट बेहोस हुने बितिकै मानिसको मृत्यु भैहाल्छ भन्ने हुँदैन । आफ्नो जीवनशैलीमा सकारात्मकता ल्यायो र कुनै पनि भावनालाई कुण्ठित नगरि सहजतापूर्वक समधान गर्न सक्यो भने हिस्टेरिया लाग्दैन । यदि भइहाले पनि पूर्ण ठीक हुन्छ । तर लामो समयसम्म यसको वास्ता नगर्ने, एकछिन बेहोस हुन्छ अनि ठीक भैहाल्छ भनी उपचार गराएन भने चै डिप्रेसनमा जाने, माइग्रेनको समस्या हुने हुने लगायतका समस्या थपिदै जान्छ र गम्भीर परिणाम नल्याउलाभन्न सकिन्न
विश्वभर काेराेनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ९ लाख नाघ्याे, कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए ?
सामुहिक वलात्कार गर्ने होटल सञ्चालक सहित ४ जना पक्राउ